TORITENYPosté par Ra-Hiandry lun., avril 16, 2012 21:25:54
― Ny Konfesy sy ny fifamelan-keloka.
“Rahefa nilaza izany izy, dia nitsoka ka nanao tamin'izy ireo hoe: Raiso ny Fanahy Masina: ny fahotana izay havelanareo dia ho voavela, ary izay hotananareo dia ho voatana.”
Ankoatr’ireo antony ilàna ny fiadanana voalaza eo ambony, dia mbola ilaina dia ilaina tokoa ny fiadanana amin’ny famelankeloka.
Matetika moa raha mamaky an’ity andinin’Evanjely ity, dia mibahana ao an-tsaina ny fahefan’ny Eveka sy ny Pretra hamela heloka. Tsy horesahina intsony io, tsy misy mahadiso an’izany, satria efa mazava. Fa ny tsy voalaza matetika kosa dia ny hoe isika rehetra koa efa samy nandray ny Fanahy Masina, ka tokony hampiasa izany fahasoavana izany amin’ny fifamelan-keloka ataontsika amintsika samy isika.
Tsy mahasolo velively ny konfesy izany fifamelankeloka amintsika samy olombelona izany, nefa koa azo ambara fa ny Konfesy ihany koa tsy mahasolo velively io fifamelankeloka takiana amintsika samy isika io. Indray andro, raha nanontany i Md Piera, hoe hatramin’ny impiry no tokony hamela ny rahalahy raha tonga mifona izy, dia novalian’i Jesoa hoe: “Izaho tsy milaza aminao hoe hatramin’ny im-pito, fa hatramin’ny impitopolo fito” (Mt 18, 22).
Mampisalasala ihany manko raha hoe nanota “maharary” tamin’ny namany ny olona iray, nefa tsy mangata-pamelana, tsy manao azafady amin’io akory, fa tonga dia lasa mikonfesy any amin’ny Pretra na ny Eveka… Mazava loatra fa afaka ny fahotany, nefa koa samy miaiky isika fa misy zavatra mandringa ao, misy zavatra tsy ampy ao amin’izany Konfesy izany, raha tsy mamela azy ilay namany, satria narary sy naratra loatra ny fony….
Tsaroana eto ny tenin’i Jesoa hoe “Raha manatitra ny fanatitrao eo amin'ny otely hianao, ka eo vao mahatsiaro fa manana alahelo aminao ny rahalahinao, (…) dia mandehàna aloha mihavana amin'ny rahalahinao vao miverina hanolotra ny fanatitrao indray.” (Mt 5, 23)
Hazava kokoa amintsika rahateo ny tian’i Jesoa ambara, raha tsaroantsika fa rehefa manatitra fanatitra na manao sorona, ny jody, dia sady misaotra an’Andriamanitra tamin’ny fahasoavana nomeny no mangata-pamelàna ihany koa tamin’izay tsy mety vita rehetra. Ka voalaza mazava eto hoe: mandehana aloha mihavana izany hoe mandehana aloha mangata-pamelana, miala tsiny aminy farafaharatsiny, … Tsy voalaza eto aloha hoe na manaiky ve izy na tsia, …. Fa ny zava-dehibe dia ny fietretena nandeha nangata-pamelana sy nifona tamin’izay olona nahadiso.
― Ny Fanahy Masina manampy antsika amin’ny famelankeloka.
Sarotra angamba hoy isika izany hanana fanetrentena hamela ny fahotana nanakarary fo antsika izany, toy ny mahasarotra ihany koa ny handeha hifona hangataka famelàna amin’izay olona nahadiso antsika, indrindra ka hoe fahotana mahafaty no vitantsika. Eo indrindra anefa no ilàna ny fahasoavan’ny Fanahy Masina. Izy no hanilo sy hanova sy hanadio ny fontsika mba hiainantsika marina ny famelankeloka avy amin’ny Paka.
Efa resin’i Jesoa rahateo ny fahotana rehetra tamin’ny Fitsanganan-ko velona, ka tsy isika indray no hiseho ho volo manoha randrana amin’izany famelankeloka izany. Sady amin’ity alahadin’ny famindram-pon’Andriamanitra ity, dia tokony haka tahaka Azy be famindram-po sy mamela heloka ihany koa isika zanany rehetra.
Koa etsy an-daniny, raha sarotra aminao ny mamela ny hafa noho ny ratsy tafahoatra nataony taminao, dia antsoy ny Fanahy Masina, ary etsy an-kilany, raha tsy vitanao ny mietry tena mangataka famelana amin’ny namanao, dia antsoy hatrany ny Fanahy Masina fa izy no manome antsika sy hampianatra antsika ny zavatra rehetra.
ven., mars 30, 2012 00:07:28